Maamulka G/Mudug iyo Bisha cas oo qalab gaarsiiyay Deegaanka Ganacfale+Sawiro – SBC
Maamulka G/Mudug iyo Bisha cas oo qalab gaarsiiyay Deegaanka Ganacfale+Sawiro
Gudoomiyaha Gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac iyo Saraakiil ka tirsan Hay’ada Bisha Cas qeybteeda gobolka Mudug ayaa maanta ku wareejiyay Qalab lagu soo saarayo Biyaha dadka deegaanka Gacnofale ee Gobolkaasi Mudug.
Munaasabad kooban oo ka dhacday Deegaankaas ayay masuuliyiintan gacanta ugu geliyeen Furayaasha Matoor iyo qalabkale oo ay Hay’ada Bisha cas geysay deegaankaasi si ay ugaga baxaanbaahiyaha biyaha ah oo deegaanka ka jirtay mudooyinkii ugu dambeeyay.
Hadal Kooban oo uu isla goobtaasi ka jeediyay GUdoomiyaha Gobolka Mudug Mr Tigey waxa uu kula dar daarmay Dadka deegaanka ee masuulka ka noqonaya qalabkan cusub ee lagu wareejiyay in ay ilaashadaan kana digtoonaadaan waxyaabaha wax u dhimi kara.
Mid ka mid ah Odayaasha Deegaanka oo kala wareegay Bisha Cas iyo Maamulka gobolka Qalabkan ayaa isagu ka mahadceliyay, kuna tilmaamay talaabadan mid muhiimad leh oo loo qaaday dhanka wanaagsan, ka deegaan ahaanna ay ka taxadari doonaan qalabkan.
Talaabadan ay qaaday hay’ada Bisha cas islamarkaana qalabka ku gudoonsiisay deegaanka Gacnofale ma ahan tii ugu horeysay waxaana mudooyinkii dambe ay ku howlaneyd ka shaqeynta dhinacyada Arimaha bulshada iyadoo iminka ka wada howlo arimo bulsheed oo ay ku hirgelineyso ceelal biyood iyo waxyaabo dan u ah goobaha ay dadka kudhaqanyihiin gudhaa gobolkaasi Mudug.